Domingo Buesa. Resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanoratra ny The afternoon nandoro an'i Zaragoza | Literatiora Vaovao
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | resadresaka, mpanoratra
Sarin'ny fonony, nahazoana alalana avy amin'i Domingo Buesa.
Alahady Buesa manana tantara lava ao amin'ny fampianarana sy fanapariahana ny Tantara amin’ny asa sy ny asa. Miaraka amin'ny boky maherin'ny 60 navoaka, ity mpahay tantara ity dia manoratra tantara sy tantara Ny tolakandro izay nodoran'i Zaragoza no anaram-boninahitra farany azy. Misaotra indrindra nanome ahy ny fotoananao tamin'izany resadresaka, ny voalohany amin’ity taona vaovao ity, izay itantarany kely amintsika ny zava-drehetra.
Domingo Buesa - Resadresaka
VAOVAO LITERATURE: Mpahay tantara manana boky maherin'ny 60 ianao. Ahoana no nitsambikina tamin'ny tantara?
DOMINGO BUESA: Nandritra ny roa taona, ny tonian-dahatsoratra Javier Lafuente dia nangataka ahy hanoratra tantara iray mba hampidiriny ao amin'ny fanangonana. Ny tantaran'i Aragon ao amin'ny Novel, natontan'i Doce Robles. Tamin'ny farany dia nampanantena aho fa hiezaka fa izany Tsy resy lahatra aho fa afaka manatanteraka ilay baikoSatria tsy mbola nanao tantara an-tsary izy ary, ankoatra izany, dia nanaja fatratra an'io fomba mampientanentana hanakaiky kokoa ny tantara amin'ny fiarahamonina io izy.
Tsaroako tamin'io fahavaratra io aho dia nanomboka nanoratra tantara momba ny lohahevitra iray izay ny antontan-taratasy nianarako fatratra ary navoakako mihitsy aza. Ary teo no nipoitra ny tsy nampoizina lehibe: tsy vitan'ny hoe afaka nanao izany aho, fa nanome fahafaham-po lehibe ho ahy koa. Faly aho nanoratra io tantara io momba ny tantara marina iray, nandalo tsy nisy fihetseham-po ny ora ary ny zava-nitranga tamin'ny 1634 dia nahazo fiainana sy tanjaka tao amin'io tontolon'ny tranomboky io. Nipoitra tao amin'ny solosiko ireo tarehin-tsoratra ary, rehefa afaka kelikely, dia nitondra ahy tany amin'izay noheveriny. Izay noheverina ho fitsapana dia lasa fitiavana. Efa teraka Horaisin’izy ireo i Jaca amin’ny maraina.
TOY: Ny tolakandro izay nodoran'i Zaragoza Io no boky faharoa anananao. Inona no lazainao aminay momba izany ary avy aiza ilay hevitra?
DB: Ny fahombiazan'ny tantara voalohany dia nitarika anay handinika, miaraka amin'ny tonian-dahatsoratra, ny fanatanterahana ny fizarana faharoa. Ary izaho indray no nanoro hevitra, satria azoko fa tsy maintsy amboary ireo lohahevitra sy habaka tantara fantatrao tsara ianao. Amin'ity tranga ity aho dia nafana fo tamin'ny endriky ny Ramón Pignatelli, ilay lehibe sary an-tsary Zaragoza, ary tao anatin’izany toe-javatra izany no niainan’ny Fikomian’ny Mofo, tamin’ny 1766, tamin’ny fomba feno habibiana no nataon’ireo mpiaro azy. Ny fanalahidin'ny fahatakarana ny fomba nijerena ity tantara ity dia hita tao anatin'ny roa taona niasako izay nitaky fampirantiana lehibe momba ny Zaragoza an'ny Fahazavana, mitondra ny lohateny hoe Fitiavana ho an'ny fahafahana. Ary izany no milaza ny tantara, ny fientanam-po amin'ny fandrosoan'ny olona nohazavaina fa tsy maintsy miaina ny fikomiana ataon’ny vahoaka tsy manan-kanina ka zara raha mandoa hofan-trano.
TOY: Afaka miverina amin'ilay boky voalohany novakianao ve ianao? Ary ny tantara voalohany nosoratanao?
DB: Hatramin'ny fahazazako dia tena tia mamaky teny aho, heveriko fa fototra izany ary fototry ny tetikasa manokana. Ny boky voalohany tadidiko namaky dia fanontana ho an'ny ankizy Lazarillo de Tormes, izay nomen’ny dadatoako malalako Teodoro, anadahin’ny raibeko. Hita izany ary avy amin'ny pejiny dia nandeha tany amin'ireo boky mahazatra hafa izay nanokatra tontolon'ny soso-kevitra ho ahy aho. Ary niaraka tamin'ireo fitaomana ireo aho dia nanomboka nanoratra tantara avy amin'ny fiainan'ny renibeko Dolores, manenina aho fa very tamin'ny fahatongavana sy ny fandehanana maro be izy, izay nahaliana ahy ny toetra sy ny fahitany an'izao tontolo izao izay nanodidina azy. Tsapako foana fa very ilay tantaram-pianakaviana izay nahatonga ahy hiatrika ny zava-misy amin'ny famaritana ny zava-misy, na dia tsy maintsy miaiky aza aho eo afovoan'ny areti-mifindra Nieritreritra ny hanoratra tantara kely mahafinaritra aho, mitondra ny lohateny hoe Ny mpisorona sy ny mpampianatra, izay nitranga tamin’ny 1936 ary ahitana ny maro amin’ireo zavatra nolazain’ny renibeko tamiko.
Noho ny fahafantarako ny fahombiazan'ity tantara ity, izay tsy maintsy navoaka herinandro taorian'ny namoahana azy tany amin'ny fivarotam-boky, dia tsy tokony hanafina ny zava-misy aho. nisy ny tsy fahombiazana, ohatra, rehefa nanomboka aho tantara momba an'i Ramiro II izay tsy vitako ary tsy fantatro izay misy, satria efa niompana tamin'ny tontolon'ny arsiva sy ny fikarohana aho. Tsy midika izany, lavitra izany, fa tsy afaka ny ho mpanoratra tantara sy mpahay tantara ary mpikaroka mahay ianao. Samy miasa amin'ny fiteny izy ireo ary miaraka amin'ny fahaizana -mety ho fahaiza-mahazo izay atolotry ny antontan-taratasy na ambara amintsika.
TOY: Mpanoratra lohany? Afaka misafidy mihoatra ny iray ianao ary amin'ny vanim-potoana rehetra.
DB: Tiako foana io prosa io Azorin Amin'ny alàlan'ny fahatsapanao ny tontolon'ny Castile, dia mandre ny lakolosin'ny fiangonana ao amin'ny tanàna mandry amin'ny masoandro ianao, manohina anao amin'ny fahanginan'ny tolakandro miaraka amin'ny siesta ao amin'ny lemaka tsy manam-petra izay nanome an'i Don Quixote na Teresa de Jesús tontolo iainana ... Ary tiako ny momba ny prosa Becquer izay ahitana izao tontolo izao feno eritreritra, tsy fandriam-pahalemana, tahotra matory ao anatintsika, fahatsiarovana izay mahatonga antsika handeha ho any amin'ny lasa sy ny fomba niainan'ireo tanàna lavitra indrindra ao Moncayo.
Tsy mahasakana ahy izany ny fanadiovana ny fitenin'i Machado, ny hakanton'ny teny ho fitaovana maneho fihetseham-po. Ary mazava ho azy fa mahafinaritra ahy izany Platero sy izaho, izay tsy inona fa ny fiezahana hanao ny zavatra mivaingana indrindra ho an'ny rehetra, mba hahatonga ny hasarotry ny fiainana andavan'andro ho faran'izay tsara, hahatakatra fa ny fahanginana akaiky sy mafana indrindra dia afaka miaraka amintsika.
Izaho a mpamaky be dia be ary tiako ny bokyTsy nitsahatra namaky izay natomboka aho, na dia eo aza ny fandrosoan'ny fiainana dia tsapanao fa voafetra ny fotoana ary tsy maintsy araraotinao amin'ny fomba tsara kokoa.
TOY: Olona inona ao amin'ny boky no tianao ho nifankahita sy noforoninao?
DB: Araka ny voalazako teo dia tiako izany Platero sy izaho satria heveriko fa varavarankelin'ny fahatsorana izany, ho an'ny maha-azo itokiana ny olombelona. Ny teny dia maka sary amin'ny pejiny ary izy rehetra miaraka dia fanambarana fihavanana amin'izao tontolo izao. Hihaona amin'i Platero, diniho izy, jereo izy. Te-hihaona sy hamorona ny toetran'ny boky Sender sasany, as mosén Millán de Requiem ho an'ny tanàna espaniola. Ary mazava ho azy Duke Orsini ny Bomarzo.
TOY: Misy fialam-boly na fahazarana manokana rehefa manoratra na mamaky teny?
DB: Fahanginana sy fitoniana. Tiako ilay fahanginana manodidina ahy satria tsy misy tokony hanelingelina anao amin'ity dia lavitra ity, satria rehefa manoratra aho dia ao anatin'ny taonjato lavitra ary tsy afaka miala amin'izany. Tsy mandre feo avy amin'izao fotoana izao aho, na koa ny feon'ny telefaona finday manafika ny fiainana manokana. Tiako ny manomboka manoratra any am-piandohana ary manaraka ny filaharany ho an'ny tantara, tsy tiako ny mitsambikina satria ny mpilalao dia mitarika anao amin'ny lalana tsy noeritreretinao ary amin'ny farany dia manitsy ny lalana ianao. isan'andro mifanesy. Araka ny nolazaiko, na dia mieritreritra momba ny teti-dratsy mandeha eny an-dalambe aza aho, mandehandeha eo am-pandinihana ny tontolo iainana na saika hatory. Manoratra foana ao anatin’ny fahanginan’ny alina aho ary avy eo dia mampita ireo pejy voarakitra ao amin’ny vadiko sy ny zanako vavy mba hahafahan’izy ireo mamaky izany sy manome soso-kevitra amin’ny fomba fijery samihafa. Zava-dehibe ny fifanoherana amin'ny zava-misy amin'ny fihetseham-pon'ny mpanoratra.
TOY: Ary ny toerana sy fotoana tianao hanaovana azy?
DB: Tiako ny manoratra. ao amin'ny tranomboky, amin'ny solosaiko, voahodidin'ny bokiko eo amin'ny tany ary miaraka amin'ny kahie-indraindray fandaharam-potoana lehibe foana- izay nanoratako ny dingana manontolo amin'ny fandraketana ny hetsika ho tantara. Ao amin'ny pejiny dia misy ny fanondroana ny vakiteny natao, ny filazalazana ny tarehin-tsoratra (araka ny hevitro azy), ny daty ifindrantsika toko isaky ny toko, raha ny marina ny zava-drehetra. Y Matetika aho no manoratra amin'ny alina, aorian'ny roa ambin'ny folo amin'ny alina ary mandra-pahamarain'ny andro, satria izao no fotoan'ny fitoniana lehibe indrindra, izany fotoana izay ny zava-niainana ny alina mihitsy no manjavozavo ny tontolo iainana ary mamela anao hiaina amin'ny fotoana hafa, na dia resaka ara-tsaina fotsiny aza. Izany no fotoana hanakimpy ny masonao sy handehananao mamakivaky an'i Zaragoza tamin'ny 1766 na namakivaky ny tanànan'i Jaca tamin'ny ririnina mangatsiaka tamin'ny 1634 ...
TOY: Misy karazana hafa tianao ve?
DB: Tiako ny mamaky. tononkalo, mahazatra sy maoderina, izay mampitony ahy ary manonofy seho feno fiainana. Tiako ny miaraka fitsapana izay ahafahantsika mifankahafantatra bebe kokoa. Izaho dia mpiaro ny mamaky teny tantara eo an-toerana, izay ianaranao betsaka, ary tiako koa ny momba ireo trakta momba ny sary masina izay mampianatra anao ny fitenin'ny sary. Saingy, ambonin'ny zavatra rehetra ary hatramin'ny fahazazako dia nahita aho Amaya na ny Basques tamin'ny taonjato faha-XNUMXTena tia mamaky teny aho tantara tantara.
TOY: Inona no vakianao izao? Ary manoratra?
DB: Tiako ny mamaky saika izay rehetra latsaka eo an-tanako, saingy rehefa mihalehibe aho ary araka ny nambarako Apetrako amin’izay tiako hovakiana ny saiko, izay mahaliana ahy, izay mampianatra ahy, izay mampanonofy ahy. Tsy hanome anarana aho satria tsy tiako ny manao laharam-pahamehana fa samy manana ny heviny sy ny tombontsoany. Ny mazava dia tiako ny mamaky tantara ara-tantara, izay ananako ao amin'ny tranombokim-bokiko midadasika ny sary feno momba ny zavatra avoaka eto amin'ny firenentsika. Ery Tsy lany ny mpanoratra aragone izay ny sanganasany no vakiako araka izay azoko atao, na dia manana voninahitra aza aho afaka mamaky ny original izay asain'ny namana sasany vakiako alohan'ny hanovana azy.
Ary raha tsy maintsy miresaka momba ny fanoratana aho izao, miaraka amin'ireo lahateny tiako omanina amin'ny antsipiriany na ireo lahatsoratra izay tsy azoko lavina, dia tsy maintsy miresaka tantara roa aho: ny iray efa vitako. Sarin'ny renin'i Goya ary ny iray hafa izay natomboko tamin'ny niandohan'ny fananganana ny katedralin'i Jaca, raha ny marina, ny fifandonana teo amin'ny mpanjaka sy ny eveka rahalahiny, izay nampifalian'ny anabaviny ny Countess Sancha. Tantara mampientam-po satria ny hijerena ny fomba ateraky ny zavakanto na dia eo amin'ny fifanandrinana aza sy ny fomba hitondran'ny hatsarana ho amin'ny fahafinaretana amin'ny fihaonana. Na dia marin-toetra aminao aza aho ary manambara tsiambaratelo, ny antsasany dia holazaiko aminao fa efa roa taona aho no nandrakitra an-tsoratra ary nandritra ny fahavaratra nandroso ny fanoratana ny tantara momba ny dimy andro farany tsy mampino momba ny fiainan'ny mpanjaka aragonese iray, mari-pamantarana ny mpanjaka eoropeanina. Lazaiko aminao fa tena tia an'ity orinasa ity aho.
TOY: Ary farany, araka ny hevitrao, ahoana no isaina amin'izao fotoanan'ny krizy iainantsika izao? Hihoatra ny tantara foronina foana ve ny zava-misy eo amin’ny tantarantsika?
DB: Azo antoka fa maro amin'ireo tantarantsika taloha no efa mitantara fotoana mitovy amin'ireo izay tsy maintsy iainantsika amin'izao fotoana izao, amin'ny fomba hafa sy amin'ny toe-javatra hafa, saingy aoka tsy hohadinoina fa ny olombelona dia iray ihany ary manana toetra sy toetra mitovy. mitovy kilema. Ary ity protagonista ity dia izay mihoatra ny tenany amin'ny vinavina ara-tsosialy miaraka amin'ireo manodidina azy sy manohitra ny manodidina azy, manokatra tontolon'ny traikefa izay mety ho toy ny tantara foronina. Rehefa manoratra ny fifanakalozan-dresaka ho an'ny tantarako momba ny Goya maha-olombelona sy akaiky, izay vao navoakako aho, dia gaga aho satria ny ankamaroan'ny zavatra lazain'ny manam-pahaizana momba ny hosodoko dia fanombanana sy fanakianana marina momba ny toe-javatra misy antsika: ny fahaverezan'ny fahalalahana, ny elanelana misy eo amin'ny mpitondra sy ny mpitondra, ny fahafinaretana hitan'ny olombelona amin'ny fampijaliana ny hafa, araka izay azony atao ... Mampianatra antsika foana ny tantara satria misy fiantsoana ny ho avy.
Na izany aza, tsy maintsy milaza aho fa resy lahatra aho fa ny antsika dia ho fotoana hanoratana tantara mampientam-po izay tsy misy ifandraisany amin'ireo voasoratra ankehitriny, satria ny famakafakana ny zava-misy dia mila fomba fijery ara-nofo. Ny fahatezerana dia tsy tokony hitondra na oviana na oviana ny penina izay mandoko ny fotoana iainantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Haisoratra ankehitriny » Literatura » resadresaka » Domingo Buesa. Resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanoratra ny The afternoon nandoro an'i Zaragoza